Taariikh Nololeedka Madadaaliyaha Kowaad Ee Bollywood-ka Akshay Kumar (King of Bollywood) Min Bilaaw Ilaa Dhamaad Oo Update Ah (+Sawiro) | Filimside.net
Home » Nolosha Jilaayaasha » Taariikh Nololeedka Madadaaliyaha Kowaad Ee Bollywood-ka Akshay Kumar (King of Bollywood) Min Bilaaw Ilaa Dhamaad Oo Update Ah (+Sawiro)
Dhalasho Wacan Super Star Akshay Kumar Oo Maanta 50-sano Jirsaday………..
Rajiv Hari Om Bhatia wuxuu dhashay 9 September 1967, waa 50-jir ku dhashay magaalada Amristar, Akshay Kumar waa atoore Hindi ah, filim qarash gareeye, kaaratee yaqaan, sidoo kalena kasoo muuqdo barnaamijyada TV-yada ka baxaan.
Sida guud labo jeer ayuu Filmfare Awards ku guuleestay oo kala ah (Laadarka ugu wanaagsan iyo shactiroolaha wanaagsan).
Akshay dadaalkiisa oo wacan iyo sidoo kalena 25-sano oo uu Bollywood-ka ka dhex muuqdo loogana dambeeyo sameynta aflaanta wajiyada kala duwan lagu jilaayo wuxuu muteestay in magacyo badan ay saxaafada ugu yeerto waxaana ka mid ah Akki, Khiladi, Khiladi Kumar iyo King of Bollywood.
Sidoo kalena Kumar shabakada Boxoffice India oo ah keyda ugu weyn ee natiijada aflaanta lagu xaqiijiyo waxay Akshay Kumar u aqoonsatay atooraha ugu guulaha badan Bollywood-ka 23-sano ee ugu dambeesay asigoo sameeyay 47-filim oo guuleesteen!!
Dhanka dhaqaalihiisa gaarka ah Akshay kaalinta 10-aad ayuu ka galay atoorayaasha aduunka ugu hodansan waxayna shirkada Forbes ku xaqiijsay Akshay daqliga soo galay xidigan 12-bilood ee ugu dambeesay (June 2016 – June 2017) inuu yahay $37 million.
Sidoo kalena xidigan wuxuu ka lacag badiyay dhanka daqliga soo galay 12-bilood ee ugu dambeesay qaar ka mid ah xidigaha Hollywood-ka ugu caansan oo ay ka mid yihiin Harrison Ford, Will Smith, Adam Sandler, Brad Pitt iyo Leonardo DiCaprio.
Shabakada Boxoffice India waxay sheegtay Akshay Kumar inuu yahay atooraha sedexaad ee ugu shacbiyada balaaran gudaha Hindiya kaliya Salman Khan iyo Shah Rukh Khan ayaa ka shacbiyad badan laakiin xidigan shacbiyadiisa kama faa’iideesanin 24-bilood ee ugu dambeesay.
Kumar 5-filim ee ugu dambeesay ee uu sameeyay weli ma jiro mid Hit dhameestiran noqday: Entertainment (Flop), The Shaukeens (Flop), Baby (Average), Gabbar Is Back (Semi Hit) iyo Brothers (Flop).
Sidaa darteed xidigan wuxuu u baahan yahay Hit dhameestiran inuu sameeyo si uu isaga dajiyo cadaadiska saaran dhanka Boxoffice-ka wuxuuna isaga dajin karaa hadii filimkiisa bisha October 2-deeda la daawan doono Singh Is Bling uu Hit weyn noqdo mardame lagama daba hadli doono.
Dhanka qaab jiliinka iyo amaanta uu helay Akshay Kumar sanadkan 2015 waayahan ma uusan helin waayo filimkiisa Baby bandhiga uu ka muujiyay siweyn ayaa loola dhacay waxaana la sadaalinaa inuu sanadkan bilad ku qaadan doono sidoo kalena filimkiisa Gabbar Is Back sheeko ahaan waa mid gudaha Hindiya laga soo dhaweeyay.
Guusha ugu weyn ee Kumar sanadkaan gaaray ayaa ah inuu Boxoffice-ka ku garaayay Hrithik Roshan oo ay isla saarteen filimada Rustom iyo Mohenjo Daro 12 August 2016.
Akshay filimkiisii kowaad Jolly LLB 2 waxaa la daawaday 10-kii Febraayo 2017 wuxuuna noqday sidoo kalena macaash xoogan ayay ka heleen kooxda cajaladaha qeybiyaan asigoo.
Waxaa Aqrisay 3,550
10 Responses to Taariikh Nololeedka Madadaaliyaha Kowaad Ee Bollywood-ka Akshay Kumar (King of Bollywood) Min Bilaaw Ilaa Dhamaad Oo Update Ah (+Sawiro)
fadlan waxan idinka codsanaya inad update kadhigtan meelaha ka khaldan tariikhda AKSHAY
sida anad ku sheegten filmka MOHRA super hit
Oo ad ka dhigtan BLOCKBUSTER
Waan ka dhignay walaalkeen mahad sanid sida aad qaladaadka yar noo tustay.
Ada mudan Zakariye Abdi
sxb waxad naga saxdaan mesha ad dhahdeen dhaqaalaha so galay Akshay kumar oo ad dhahdeen(June 2015 – June 2016) inuu yahay $31.5 million.
please nooga dhiga mida 2016/2017
o ah 37million
Waan ka dhignay waadna ku mahad santahay sida quruxda badan ee taariikhda Akki noola turxaan bixisay…
Taariikhdiit hore ugu jirtaa mise waa nid lasoo casriyeeywy
Walaal Update ayaan ku sameenay waa midii hore.
filmka namastey london hit dhamestiran miya mase maaha iga jaahil saara idinko mahadsan
Maya walaal waa Semi Hit sida shabakada Boxoffice India ku diiwaan gashan.
waa yaabe magaca king of Bollywood shahrukhan Lee Ku ogaaye goorma akshay na loo bixiyay saxafada shahrukhan ayay igu yeerta magacyo kala duwan sida king khan king of Bollywood baadshah of Bollywood king of romance sxb marka mararka qaar hadalada waa laga fiirsada ee taladeyda qaado waxan ahay taagere number 1 srk